Tag: goobta cad | Martech Zone
Tag: goobta cad
Sabti, Agoosto 17, 2013 Sabti, Agoosto 17, 2013 Douglas Karr
Warbixinta Sahaminta Waayo-aragnimada Isticmaalaha ee 'Econsultancy', oo lala sameeyay WhatUsersDo - oo ah tijaabin isticmaalka internetka iyo barta cilmi-baarista khibradaha - ayaa soo bandhigtay tiro-koob. 74% ganacsiyada waxay rumeysan yihiin in khibrada isticmaale ay fure u tahay hagaajinta iibka, beddelaadda iyo daacadnimada. Waa maxay Khibradda Isticmaalaha? Sida laga soo xigtay Wikipedia: Khibrada isticmaale (UX) waxay ku lug leedahay shucuurta qofka ku saabsan adeegsiga badeecad, nidaam ama adeeg gaar ah. Khibrada isticmaalaha waxay muujineysaa khibradaha, saameynta, macnaha iyo qiimaha dhinacyada isdhexgalka aadanaha iyo kumbuyuutarka iyo
Khamiis, Juun 26, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo arxan daran. Waxaan bilaabay mashruuc Wiki ah si aan ula socdo mashaariicda aan sameynayo, waxaan shaqaalaysiiyey hal abuure dhalinyaro ah oo i caawiya, waan ka casilay shaqabixiyeeyga waxaanan aqbalay jago cusub oo aan ka bilaabay deegaanka. Ma doonayo inaan ku gubo buundooyin kasta oo aan la shaqeynayo (oo aan jeclaa inaan la shaqeeyo oo aan u shaqeeyo) sidaa darteed waxaan ku mashquulsanaa wadahadal lala yeesho shaqaalaha, hoggaamiyeyaasha, iyo lamaane macaamiil gaar ah leh.